မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစက်ဘီးစီးဖို့ဘယ်လိုအခြေအနေပေးသလဲ။ - စက်ဘီးစီးခြင်း
အဓိက > စက်ဘီးစီးခြင်း > စက်ဘီးစီးအေးစက် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
စက်ဘီးစီးအေးစက် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
အပြောင်းအလဲနှင့်အတူပျဉ်ပြား: core ကိုအစွမ်းသတ္တိအပေါ်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်ကဆိုင်ကယ်။ အဆုတ်: မီးတက်ကအဓိကကြွက်သားတစ်ပန်းစက်ဘီးစီးခြင်းအပါအဝင်မင်းရဲ့glutes, quad, နွားသငယ်နှင့်တံစို့။ Leglifts: ပစ်မှတ်မင်းရဲ့ချောမွေ့နင်းသောလေဖြတ်များအတွက်တင်ပါးဆုံရိုး flexors နှင့်ဝမ်းဗိုက်တည်ငြိမ်ကြွက်သား။ Burpees: အပြည့်အဝလိုအပ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာပေါက်ကွဲစွမ်းအင်။
Perineum တွင်ကြီးမားသောသွေးကြောများနှင့်သင်၏ pudendal အာရုံကြောများပါရှိသည်။ ၎င်းသည်areaရိယာ၏ခံစားချက်ကိုပေးသောကြောင့်ထုထည်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ Perineum ရဲ့အထက်မှာသင့်ရဲ့ဆီးကျိတ် - ဆီးကြိတ်အရည်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ urethra ကိုဖြတ်ကျော်တဲ့ဂလင်းတစ်လုံးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်ကုန်းနှီးပုံသဏ္Givenာန်ကြောင့်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ထုံထိုင်းခြင်း၊ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆီးကျိတ်ပြproblemsနာများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလုပ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြစို့။
ဒါကြောင့်စက်ဘီးစီးရန်တကယ်ပင်အတုအခြေအနေပါပဲ။ မိနစ် ၃၀ အကြာမှာကျွန်တော်ထွက်လာပြီးလိင်တံမှာအာရုံခံစားမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကောင်းတာကသင်အာရုံပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာသင်ကံကောင်းတာပဲ။ ဒီတော့တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားရင်ရေရှည်မှာဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရေတိုမှာဘာဖြစ်မလဲ။ အခြေခံအားဖြင့်သင် perineum အပေါ်တိုက်ရိုက်ဖိအားများကြောင့်သင်အာရုံကြောများကို နှိပ်၍ သွေးကြောအချို့ကို နှိပ်၍ သွေးကြောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်၎င်းသည်ရေရှည်ပျက်စီးမှုမဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်ဂရုစိုက်သည့်inရိယာ၌ထုံထိုင်းစေသည်အထိအနည်းငယ်သေးငယ်သောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ငါဟာငါသိတယ်၊ မင်းမှာသင့်တော်တဲ့စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့တစ်ယောက်ယောက်သင့်ရဲ့ကုန်းနှီးနဲ့အတူသူနဲ့ပတ်သတ်တာကိုကြည့်ဖို့သင်ရတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစီးနင်းနိုင်ပြီး၎င်းနယ်မြေတွင်ထုံထိုင်းပြီး၎င်းသည်ထုံနေပြီးထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လျှင်သင်မလွှဲမရှောင်သာရေရှည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းသာမန်အသိသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြာတတ်သည် ကိုယ့်လက်ျာစက်ဘီးမထိုက်မတန်နှင့်ကုန်းနှီးရပါဘူး။ ထိုမှတဆင့်ထုံနေသည့်ကာလတစ်ခုသည်ရေရှည်တွင်ဤနယ်မြေအတွင်းရှိခံစားမှု (သို့) စိုက်ထူခြင်းနှင့်အခြားအရာများအားမထိခိုက်စေပါ။
ထိုအခါလာမည့်ခေါင်းစဉ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ကျနော်တို့ထုံအကြောင်းကိုကြားသိသောအရာကနေ, စက်ဘီးစီးခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကို ဦး တည်ကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲထုံခြင်းအကြား link တစ်ခုရှိပါသလား - အဖြေမရှိပါ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အရေးကြီးမှုဖြစ်သည်။ စိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများသို့ ဦး တည်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်စေသောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၌ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့ရှိပါက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်နိုင်သော်လည်းနှလုံးရောဂါလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာလူလတ်ပိုင်းလူအများစုသည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုစတင်ကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်ရောက်သူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးနေလျှင်သင်၏ပထမဆုံးအတွေးက 'အိုး၊ ဒါကစက်ဘီးစီးတာကြောင့်ငါ့ရဲ့ကုန်းနှီးပဲ' ဟူ၍ မဖြစ်သင့်ပါ။ ငါ့ခေါင်းကိုသဲထဲမှာမြှုပ်မထားသင့်ဘူး။ ဒါကရောဂါမပြနိုင်သေးတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အရိပ်အယောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီဟာကိုထုတ်ဖို့လိုပါတယ် သင့်ရဲ့ဆီးခုံမို့မို့အာရုံကြောကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်အတော်လေးခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အတော်လေးခက်ခဲပါသလား။ သင့် perineum အပေါ်သက်ရောက်မှုများကသင့်ကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့ဒါကသင့်ကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သွားကြည့်ပါ။ ပထမ ဦး စွာနှလုံးအမြင်အရသင့်တော်သော MOT တစ်ခုရရှိရန်အတွက်အဘယ်ကြောင့်စိုက်ထူခြင်းပြproblemနာကိုကုသစရာမလိုသနည်း။ ဆိုလိုတာကစက်ဝိုင်းကပြည့်နေပြီ။
၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြတ်တောက်သွားသောအရာမှသင်ထွက်ပြေးလာနိုင်သောတကယ့်ကျန်းမာရေးပြproblemနာသို့သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သင်ကသူတို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ဆီးကြိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကော။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, စက်ဘီးစီးခြင်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုကိုမမှန်မကန်စစ်ဆေးခြင်းရှိမရှိကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသွေးစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စက်ဘီးတစ်စီးကိုသင်စီးနင်းလိုက်ပါကသင်၏ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် PSA Artificialially အနေဖြင့်အသုံးပြုထားသောသင်၏သွေးစစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောယူဆချက်ရှိသည်။ သွေးစစ်ဆေးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဆီးကျိတ် - တိကျတဲ့ antigen သွေးစစ်ဆေးမှုကိုသင်ရောက်သည်အထိသင်ဒီသွေးစစ်ဆေးမှုကိုသင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များပြားလာပြီးတဲ့နောက်သင်စက်ဘီးစီးပြီးအမှန်တကယ်မမှန်လို့သင်ဘယ်တုန်းကမှမလိုအပ်သောစမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခွင့်အလမ်းနည်းနည်းထိခိုက်နိူင်သော်လည်း၊ သင်သည်များစွာသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေပြုသုတေသနကိုကြည့်ပါကဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအတွက်မော်လီကျူးအမှတ်အသားများစွာသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏မည်သည့်လက္ခဏာကိုမျှထူးခြားမှုမရှိသောကြောင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကသင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းသည်မမှန်ကန်သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းကိုမထိခိုက်စေနိုင်သောကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးသည့်အရာအားလုံးကိုတိုးတက်စေသည်။
ပြီးတော့သူကပေါ်တတ်၏။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏အဘယ်သူမျှမမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားတွေအနေနှင့်ငါတို့လုပ်သင့်သည်များကိုစဉ်းစားပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတာနဲ့အမျှဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလာတယ်။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ယခုရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုသတိပြုမိရန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည့်အရာများမှာရေအလုပ်လက္ခဏာများ၊ ကျောရိုးနာကျင်ခြင်း၊ ရေတွင်သွေးထွက်ခြင်းပြproblemsနာများ၊ ထိုအရာများကိုပြန်လည်သက်သာစေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုသို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်နှင့်အကဲဖြတ်မှုအပေါ်သင့်လျော်သောစကားပြောဆိုမှု ဦး ဆောင်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟုအလိုအလျောက်မဆိုလိုပါ။ သို့သော်၎င်းအထူးကုဆရာ ၀ န်ကသင့်အားစစ်ဆေးမှု၏ကောင်းမွန်သောအရာများနှင့်စမ်းသပ်မှု၏အားနည်းချက်များကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဒီမှာဘယ်အသက်အရွယ်အကြောင်းပြောနေတာလဲ။ ဘယ်အသက်အရွယ်ကိုသင်ပူပန်သင့်သလဲ။ ထိုအခါငါသင်သိဝမ်းနည်းဖွယ်ဥပမာများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိရှိကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့် သင်မှန်သည်။
ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာငါအရမ်းပုံပျက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာဒီလိုလေ့ကျင့်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတာကြောင့်သင့်ရဲ့အသက် ၃၀ မှ ၈၀ အတွင်း ၈၀ နှင့် ၉၀ အတွင်းလူနာများကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာစိုးရိမ်စရာရောဂါလက္ခဏာများမထိတ်လန့်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပြသနာကဘာလဲ၊ အနီရောင်အလံများပါ ၀ င်ရန်နှင့်သင်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဟာစက်ဘီးစီးသူများအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြisနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ဟာလူလတ်ပိုင်းအရွယ်များဖြစ်ကြပြီးဒါကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မင်းအကြောင်း, ဒါပေမယ့်အန်တိုနီနှင့်ဤစကားလက်ဆုံမှကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးသောထုတ်ယူမှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သေဆုံးမှုကိုရင်ဆိုင်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါအမှန်တကယ်အကူအညီရှာဖွေသင့်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်သူအကြီးမားဆုံးပြproblemနာ။
ယခုကျွန်ုပ်သည်လေဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိကျွန်ုပ်၏ထုံနေသောလိင်တံအကြောင်းပြောပြသောအခါကျွန်ုပ်သည်သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်မျှသာပြောပြခဲ့ပါသေးသည်။ သို့သော်ဤမှတ်စုကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အနည်းဆုံးဒီတနင်္ဂနွေတွင်ကျင်းပသောကလပ်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးစကားပြောပါ။ ဒီဟာကငါတို့နဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အစပြုမှုအတွေ့အကြုံဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်ထပ်တူအကြောင်းအရာနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်။ နားမကြားသူများပထမဆုံးပြfirstနာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သင့်တော်သောကုန်းနှီးကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားကူညီပေးမည့်ဤချန်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုသာရှိသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်အဖွဲ့ ၀ င်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်များကိုတိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်ခြင်းအတွက်ရှုတ်ချနိုင်သည်။စက်ဘီးစီးခြင်းအတန်းဟာတကယ်တော့ကောင်းတယ်အေရိုးဗစ်တိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းအေးအေးဆေးဆေးနှင့် Preseason နှင့်ရာသီ - နှစ် ဦး စလုံးအဘို့ပြင်ဆင်ပါအေးအေးဆေးဆေး။ ဒီကိုသုံးပြီးစက်ဘီးစီးခြင်းအတန်းသည်အေရိုးဗစ်နှင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေခံနိုင်ရည်ကိုကူညီသည်။
တစ်နေ့ကိုမိနစ် ၃၀ လောက်စက်ဘီးစီးနေသလား။
စက်ဘီးစီးခြင်းစက်ဘီးပေါ်နှင့် off သင်၏ခံနိုင်ရည်တိုးပွားစေပါသည်
အနည်းဆုံးစက်ဘီးပေါ်လေ့ကျင့်တစ်ရက်လျှင်မိနစ် ၃၀သင်၏နှလုံးသွေးကြောနှင့်ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ တသမတ်တည်းကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏အေရိုးဗစ်စွမ်းရည်တိုးတက်မှုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်၊ သင်သည်ပိုမိုရှည်လျားသောသို့မဟုတ်ပိုမိုပြင်းထန်သောစီးနင်းခြင်းကိုစီးနင်းနိုင်သည်။
မြင်းစီးခြင်းသည်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်အချိန်ကိုဖိထားပါကမိနစ် ၃၀ အတွင်းသင့်လျော်သောစီးနင်းလိုက်ပါလာနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကဒါကိုစမ်းကြည့်ပြီးနာရီဝက်လောက်မှာသင့်တော်တဲ့စီးလို့ရမလားဆိုတာစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ သင်ကြိုက်တဲ့ gcn app ကိုစစ်တမ်းတစ်ခုယူပါ။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အခြေအနေနှင့်မတူသောကြောင့်စီးရီးစီးရန်မိနစ် ၃၀ ကြာသောဖိနပ် gocycling ကိုပြုလုပ်ရန်မိနစ် ၃၀ သာအချိန်တွင် gcm မော်ဒရေးသမားများလုပ်သည့်အရာများ၏လက်တွေ့ဘ ၀ အချို့ကိုသင်ပြပါမည်။ လမ်းမ။
Mypike မှာငါ့ရဲ့ဂီယာနဲ့အတူတံခါးထွက်ထွက်ဖို့မိနစ် ၃၀ ကြာမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါက ၂၀၄၀ ပြည့်လွန်ကာလတို့သောအချိန်ကာလအပြီးတွင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရေချိုးခြင်းတို့ဖြင့်တာဘိုတွင်မိနစ် ၃၀ အတွင်းတကယ့်လျောက်ပတ်သောသင်ကြားမှုသည်အလွန်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့လိမ့်မည်။ ငါတတ်နိုင်သလောက်မကြာခဏနွေးထွေးခြင်းနှင့် cooldown နှင့်အတူလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါစုစည်းဖို့လုပ်နိုင် 10-15 စုံလုပ်နိုင်ထင်, ဒါကြောင့်ငါသွားနှင့်ငါ့ဂီယာအဆင်သင့်နှင့်ငါ့စက်ဘီးအဆင်သင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ မိနစ်ကျော်လောက်ကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အလျင်မြန်ဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော့်ရဲ့ဝါယာဥ်ကိုစတင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်စက်ဘီးပေါ်မှာကျွန်တော်လေးမိနစ်လောက်ပဲမျှော်လင့်နေခဲ့တာကြာပြီ။ ငါတကယ်ပူနွေးလာတယ်လို့ခံစားရလို့တကယ်ပန်ကာကိုဖွင့်ရမယ်လို့ညည်းညူတယ်၊ ဒါဆိုငါ lten၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမစတင်မီစက္ကန့် ၂၀ အလိုမှာအဆင်ပြေသွားပြီ။ ယခုငါအလှည့်ရောက်လာသည် ငါဟာများသောအားဖြင့် ၁၀-၁၅ မိနစ်အကောင်းဆုံးသောနွေးထွေးမှုမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါပထမပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလွယ်လွယ်ကူကူယူသွားမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါဆိုငါတို့သူတို့ထဲကို ၀ င်လာရင်ငါ့မှာလေးခုရှိတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာငါတစ်ချိန်ကဘယ်ရက်လဲ၊ တစ်ကြိမ်ဘယ်တော့လဲငါအဝေးကိုထွက်သွားဖို့ပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမိနစ် ၃၀ ပေးပါ။ အပြင်မှာအေးရင်အပြင်မှာအေးရင်ငါအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။ အပြင်မှာနေပါငါအရမ်းကြာနေရင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုနဲ့လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ် ငါမြန်မြန်လုပ်ရမယ်သိတယ်ဇုန်ထဲကိုဝင်ဖို့အသွားအလာယိုတာ၊ များများပြောင်းရမယ်၊ ဝင်ရမယ်၊ တံခါးကိုထွက်တဲ့အခါချက်ချင်းဂိုးသွင်းရမယ်။ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူး ၂ ချက် ၃ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကိုနွေးအောင်၊ စက်ဘီးစီးတာကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော့်ကိုရွေ့လျားဖို့အတွက်ငါးမိနစ်လောက်နှလုံးခုန်နှုန်း ၁၂၀ ကနေ ၁၄၀ အထိမြန်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်တစ်မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါ။ ဒါကြောင့်ငါလုပ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သုံးမိနစ်ရှိသည်, ini ရုံထရန်ရင်ခွင် timer နေရာမှာနှိပ်။ လာမယ့်ငါးမိနစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဟာကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မားတဲ့ခန္တာကိုယ်ကိုထိန်းထားချင်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကိုသိပ်ပြီးတင်းတင်းမဖိချင်ဘူး၊ အထူးသဖြင့်မင်းမှာအချိန်သိပ်မရှိဘူးဆိုရင်၊ Biggear ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အာရုံမစိုက်ချင်ဘူး။ နှလုံးခုန်နှုန်းအလွန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်နှလုံးသွေးကြောစနစ်တွင်သင်၏အရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားရန်ခဲယဉ်းသောအရည်တစ်ချောင်းကိုလိုချင်ရုံသာမကမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မိနစ် ၃၀ အတွင်းစီးနိုင်သည့်မိနစ် ၃၀ အတွင်းစီးနင်းရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါလုပ်နိုင်တာနဲ့ငါဒီကောင်းတဲ့စက်ဘီးစီးစီးနင်း, ငါ့ခြေထောက်ဖြန့်ငါ့အဆုတ်လေ့ကျင့်ခန်း, သဘာဝနှင့်အတူတ ဦး တည်းဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ကောင်းအတော်လေးစိတ်ဖိစီးမှုအလုပ်နေ့၏အလယ်၌ငြိမ်းချမ်းသောအခိုက်အအေး yeah yeah ငါ့နေ့ရက်ကာလကိုသာအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ယူချင် စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်၊ မင်းရဲ့အဝတ်အစားလဲတာပိုကောင်းတယ်။
ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားပါ၊ သင်ဒီမှာမရှိပါ၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးခလုတ်ခုံကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်ထွက်သွားပြီ၊ အပြင်ဘက်မှထွက်နေပြီ၊ အခုတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့နှစ်မိနစ်လောက်အချိန်ယူရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါစက်ဘီးပေါ်ကတံခါးကနေအကုန်လုံးဖယ်ထားလို့ ၁၃ မိနစ်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုငါခွင့်ပြုခဲ့တယ်၊ ငါဟာငါ့လမ်းတွေပေါ်မှာတစ်လမ်းတည်းလျှောက်နေမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကစာရွက်ပေါ်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာထက်ပိုရှည်တဲ့ကွင်းဆက်တစ်ခုကိုမရွေးချင်ဘူး။ ဆိုလိုတာကငါပြန်လှည့်ပြီးပြန်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဆိုလိုတာကငါအချိန်ပြန်ပြန်ရမယ်။ မိနစ် ၃၀ လုပ်ပါသလား။ ၁၃ မိနစ်သာသွားမယ်၊ ၂၆ မိနစ်စုစုပေါင်းခရီးသွားရမယ်။ ငါအဲဒီ ၂ မိနစ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ နောက် ၂ မိနစ်ထပ်ပေးမယ်။ နောက်ပြီးငါအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးပြီးပြီ။ မိနစ် ၂၀ အတွင်းကားမောင်းချိန်မိနစ် ၂၀ အတွင်းလူတိုင်းကောင်းစွာစီးနင်းနိုင်သင့်သည်။ နာရီဝက်ကျော်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စက်ဘီးဖိနပ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့သော်လည်းဂရုမစိုက်ပါကကျွန်ုပ်ရရှိသောအကြောင်းရေးသားခြင်းအကြောင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောစိုစွတ်သောစိုစွတ်သောစိုစွတ်သောစက်ဘီးဖိနပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မိနစ် ၃၀ လေ့ကျင့်ခန်းတွင် bluesnow အတွက်ကျွန်ုပ်အားသီဆိုစေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြင်ဘက်သို့ ထွက်၍ ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောရေချိုးကန်ရှိတောင်များအနည်းငယ်သို့တက်လာလိမ့်မည်။ ဒီ window ထဲမှာ vo2 max အားစိုက်ထုတ်မှု၏မိနစ်, ငါဘာလုပ်ရမလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ ၁၀ မိနစ်ကြာတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကဝင်ပေါက်တွေတက်ဖို့မိနစ် ၂၀ ကျန်တယ်၊ ပျမ်းမျှ ၁၀ ကအရမ်းခက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီမှာငါလျောက်ပတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်နှစ် ဦး ကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ၃၈၀ ၄၀၀ ဝပ်နဲ့အဲဒီ ၁၀ မိနစ်လောက်ပေါ့။ ငါ turbo 19 နှင့်မိနစ်ခွဲအကြာ၌ထိုကဲ့သို့သော vo2 max endstop ပြောဆိုမှုများအပေါ်ယခုငါလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်စက္ကန့် 20 အားထုတ်မှုရေတွက်ရပ်တန့်ပေမယ့်ငါနိုးထစတင်ငါကျိန်ဆို, ငါ့နှလုံးခုန်တိုး, ဒါကြောင့်ငါခန့်မှန်းကောင်းတစ် ဦး လေ့ကျင့်ခန်းရငါ နောက်ငါးမိနစ်လောက်ကြာရင်အအေးခံစရာလိုသေးတယ်။ နောက် ၅ မိနစ်ကနောက်နှစ်မိနစ်အကြာမှာငါ့ခြေထောက်တွေကိုလှည့်ပြီးငါသုံးမိနစ်အတွင်းရွေ့လျားနိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်နည်းနည်းလေးကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့။ အခုငါဆန္ဒရှိပေမယ့် ၁၀ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့လမ်းပေါ်မှာပဲရှိနေတာ။ တကယ်တော့ဒီနေရာကိုငါကိုယ်တိုင်ဒုတိယဒုတိယအကြိမ်လုပ်ပြီးနာရီ ၂၆ လုံးအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာပါပဲ။ မိနစ်ပိုင်းပါ။ ဆိုလိုတာကကျွန်မအိမ်ပြန်ဖို့နဲ့အပြောင်းအလဲလေးမိနစ်ရှိမယ်၊ အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ကေးလေးတစ်ခုအတွက်ဒီဟာကိုငါထပ်ခါတလဲလဲရယ်ရတော့မယ်။ ၇ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး။ ငါဆိုလိုတာကငါဟာရိုးရိုးသားသားဖြစ်ဖို့စောစောစီးစီးဖြစ်ဖို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုနွေ ဦး ရာသီမှာလာရွေးတာပါ၊ ငါသူတို့ကိုဒီမှာသတိပြုမိလိုက်တာငါရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့ကိုအရမ်းအရည်ရွှမ်းပြီးစမ်းကြည့်ရအောင်။ ငါနင့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်နင့်ကိုချစ်တယ်နင့်အတွက်ငါနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် တောင်သည်မတ်စောက်သောတောင်တက်ဖြစ်ပြီး Myride နှင့် Carrick တို့၏အလယ်တွင်ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင်ရှိပြီးယခုမြစ်အထက်တံတားပေါ်သို့တက်။ ၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ငါတို့မိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်မှောင်နေပုံရတယ်။ အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသောကနူးလှေသည်မတော်တဆမှုအနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့တာမို့နာရီဝက်အတွင်းကနူးလှေစီးစီးစီးသွားလို့မရဘူး။ ငါနည်းနည်းလေးဆုံးရှုံးသွားပြီ၊ ပြန်သွားရတာပိုကောင်းတယ်။ ကောင်းပြီ, လမ်းကြောင်းမဟာဗျူဟာစကားပြောနှင့်ရိုးသားဖို့, ငါ ai အနည်းငယ်က c တယ်ရှိသည် ငါ downsiskin တောင်ကုန်း၌ရှိ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကဒီကိုရောက်ဖို့မိနစ် 30 ကြာသည်နှင့်ပြန်လမ်းအားလုံးကုန်းတက်ဖြစ်၏, ဒီကငါ့အစီအစဉ်ကိုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ငါကစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး, ငါမှာအားလုံးမှတဆင့်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး ငါဒီအစည်းအဝေးကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါရွှေ့ရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးကမိနစ် ၃၀ အကုန်လုံးမှန်ကန်သွားပြီ။ ဒီဝါကျကိုကျွန်တော်ပြီးပြီ။ နောက်ဆုံး ၂ မိနစ်တံခါးခုံနောက်ဆုံးစက္ကန့် ၃၀ ငါရိုက်မယ်၊ ငါရိုက်မယ်။ ၂ မိနစ်နားချိန်မှာ outokay ကိုစက္ကန့် ၃၀ လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပထမ ၂ မိနစ်ပြီးပြီ။ အခုတော့ ၂ မိနစ်အခမဲ့ရတယ်။ ငါကအအေးခံတော့မယ်။ နောက် ၂ မိနစ်ထပ်လုပ်မယ်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ငါ့အတွက်လမ်းဘေးမှာပျော်စရာကောင်းအောင်ဒီဒေသရှိသဲတွင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာတစ်နေ့တာမိနစ် ၃၀ သုံးရခြင်းကိုတကယ်ပျော်တယ် ဒါကကျွန်တော့်မှာစက္ကန့် ၆၀ ကျန်ပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ဒီနှစ်မိနစ်ကြာကြိုးစားမှုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်။ ပြီးတော့စက်ဘီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်မှုကိစ္စတချို့လုပ်ပါ့မယ်။ ဒုတိယတစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။ , ငါတို့ကဒုတိယ set ကိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့မှာနှစ်မိနစ်လောက်ရှိသေးတယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ Vo2 ကြားကာလတွေအတွက်ငါဒီ session ကိုငါ့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေငါ့ဖိနပ်၊ ငါ့စက်ဘီးလိုတာကိုမှတ်မိဖို့ငါတော်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါမေ့ခဲ့တယ် ဂဟေဆော်အပေါက်သုံးခုထပ်ကြိုးစားလေလေ၊ ထို့နောက်ငါဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဤကဲ့သို့သောသင်ခန်းစာရှိလျှင်သင်နွေးထွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိမ့်မည်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ၂၇ မိနစ်ကိုရောက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ၂ မိနစ်အကြာမှာဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ session တစ်ခုပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်အတော်ကြာမစောင့်ရသေးတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ခြေထောက်တွေလောင်နေတုန်းပဲ၊ ငါ့ရင်ခုန်သံကတော်တော်မြန်နေတယ်။ ငါအခုမှထွက်လာရင်ငါ့ခြေထောက်တွေကမနက်ဖြန်ကိုမုန်းလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုငါ turbo ပေါ်မှာမိနစ်အနည်းငယ်လောက်နေပြီးပုံမှန်အေးအောင်အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တယ်။ နောက်မှနာကျင်မှု၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာတွေတွေးခဲ့မိလဲ၊ ထွက် ထွက်၍ ရေချိုးခန်းယူဖို့သုံးမိနစ်လို့လား။ ဒါ့အပြင်ဟီလာပါဝါနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုကြားကာလတွေပြီးသွားပြီ။ စက်ဘီးကိုရပ်လိုက်ရင်စက်ဘီးစီးတာကိုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ အခုတော့ငါနောက်ထပ်စက္ကန့် ၂၀ လောက်ကိုင်ထား ဦး မယ်။ ဒါကြောင့်ငါလမ်းပြန်လျှောက်ရင်းနဲ့ဒီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ အခုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ငါဖျားနာခံစားရတယ်။ အားလုံးအတွက်ငါနေထိုင်တဲ့haveရိယာရှိတယ်ငါဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာဘူး ငါအိမ်ပြန်ရန်ဝေးလွန်းမည်မဟုတ်ငါနောက်ဆုံးလုပ်ရန်နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပြန်ရောက်စဉ်လမ်းဘေးတွင်သာလုပ်နိုင်သည်။ အိုကေ၊ ယခုစက္ကန့် ၂၀ မျှအကြာငါတောင်တက်ခြင်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အခုငါအိမ်ပြန်မယ်။ ငါ ၂၅ မိနစ်ကားမောင်းတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ အိမ်မှာသုံးမိနစ်၊ နှစ်မိနစ်၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်တော့မယ်။ ပြီးတော့ငါအလုပ်ပြန်လုပ်တော့မယ်။ နာရီဝက်လောက်ဆိုတော့အခုငါယုံကြည်ပြီငါစားပွဲခုံမှာတွေ့မယ်ဒါငါ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပဲပြီးသွားတယ်၊ ငါကအများဆုံးမော်ကွန်းခရီးစဉ်တွေမထွက်ခဲ့ဘူး၊ ရပါတယ် လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေသန့်လေလေ။ ဘဝမှာတစ်ခါတစ်လေဘာမှမလုပ်တာကပိုကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်လို့မရဘူး။ တစ်ခုခုလုပ်တာထက်ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ မင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမင်းသိတယ် တခါတရံမှာထွက်ပေါက်၊ မင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလှည့်ပြီးကြိုးစားကြည့်တာကမှော်အမှန်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့်ငါပြန်သွားပြီးအားလုံးစီးနိုင်တဲ့စီးပွါးရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာမိနစ်အနည်းငယ်လောက်ထိုင်ခုံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါတစ်မိနစ်ပူနွေးလာသလားငါအလွယ်တကူအရှိန်အဟုန်မြှင့်ငွေပမာဏကိုလုပ်ခဲ့တယ်ငါစက်ဘီးမှနှစ်မိနစ်သို့ငါ့မိနစ်နှစ်ခုပြု။ Sprint ပြေးယခုငါ n စုံတွဲသည်ဤနောက်ဆုံးအပြီးသတ်ဖို့နောက်ဆုံး Sprint ပြုပါလိမ့်မယ် ဒီတော့ဒါကငါနဲ့အတူမိနစ် ၃၀ လောက်ပဲ။ မင်းကဒီကနေခုန်ထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုပိုသက်သာစေမယ်။ မင်း ဦး နှောက်ထဲမှာသွေးတွေရလာလိမ့်မယ်။ သင်ကအကောင်းမြင်တယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်းပြောစရာရှိတာကပျော်စရာပါ၊ သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ကိုအားလုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်ဤစက်ဘီးကိုနှစ်သက်ပြီးမျှော်လင့်ခြင်းကြောင့်သင်၏စက်ဘီးကိုစီး။ ဤသေးငယ်သောစီးနင်းမှုကိုခံစားရန်သင့်အားမှုတ်သွင်းမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောတိုင်းပြည်လမ်းများပေါ်တွင်အကြိုက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ (သို့) အကြိုက်ဆုံးခရီးစဉ်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ငါတို့တွေအားလုံးလုပ်သလိုမင်းတို့ဆီကကြားတာပေါ့။ ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းမှာအသိပေးပါ။ အခုမင်းရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုကြားချင်တယ်၊ ငါအစည်းအဝေးကိုပိုကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကဂရုတစိုက်စောင့်ဆိုင်းပါ၊ မကြာခင်တွေ့မယ်။ လူတိုင်းကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှင့်ပျော်စရာစီးနင်းရှိသည်
သင်ပိုမိုအားကောင်းလေ၊ သင်ထိန်းချုပ်နိုင်လေဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်။ 'ထိပ်တန်းလမ်း Sprint အများစုမှာ mesomorphic ရှိသည်ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဍာန်, ထူးချွန် cardio ဝါကြွားနှင့်ကောင်းတယ်အထက်ကိုယ်ခန္ဓာသူတို့ရဲ့ခြေထောက်ပါဝါဖြည့်ရန်ခွန်အား။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကြွက်သားများ၊ အားကောင်းစွာတည်ဆောက်ပြီးများသောအားဖြင့်မြင့်မားသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုရှိသောကြွက်သားများရှိသည်။
triathlon ရှိအကွာအဝေးအမျိုးမျိုးအတွက်မည်သည့်ကိုယ်ထည်ဘောင်သည်သင့်တော်သနည်း။ အဆင်ပြေမယ့်ပြိုင်ပွဲနည်းပြလိုပဲ? လုပ်သာလုပ်ပါ။ (တင့်တယ်သောဂီတ) Trainiacs ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲငါစတာကိုဒီနေ့ကုန်ဆုံးတော့မယ်။ ဤသည်ကန ဦး vlog ၏နည်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နေ့၏အဆုံးနှင့်စတင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့၏စတင်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယနေ့ငါဒီမှာပြောလိုသောအရာ၏ဇာတိကိုရချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့အလုပ်များသောနေ့၊ အလုပ်များ၊
ဆောင်းပါးများစွာကိုလှည့်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်ဖြေချင်လဲ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာဒီအကြောင်းပြောခဲ့လို့ပါ။ ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များကိုချစ်, မှတ်ချက်အပိုင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အများဆုံးကျပန်းမှတ်ချက်ကဘာလဲစိန်ခေါ်? ထင်မြင်ချက်ပေးတာ၊ နှာခေါင်းပေါက်တာကောင်းတာလား၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူက triathlon ရဲ့အကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားဆိုတာဘာလဲ၊ triathlon ရဲ့အကွာအဝေး ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင်မသိရင်၊ အဲ့ဒီအတွက်ဂရပ်ဖစ်အချို့ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထားနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအဓိကကိုယ်ထည်သုံးမျိုးရှိတယ်။ မင်းရဲ့ဂျပိန်လူတစ် ဦး၊ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ငါနင့်ကိုငါမစားနိုင်ရင်ငါအလေးချိန်မတင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။
ထိုအခါသင်၏ mesomorph ရှိသေး၏။ ၎င်းသည်သင်၏အားကစားသမားနှင့်သင်၏ကျယ်ပြန့်သောပခုံးများကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အပို ၀ န်ဆောင်ခန့်ဆောင်သောသယ်ဆောင်သူမပါ။ ထိုအခါ endomorph ရှိသေး၏။
Triathlon Taren ဟာကျွန်တော့်ရဲ့ ၂၁၅ ပေါင်မိမိကိုယ်မိမိဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဤသည်သင်၏အရပ်ရှည်ရှည်လူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်, ဒီသူတို့ရဲ့အစာအိမ်တဝိုက်အဆီတွေအများကြီးရှိပြီးသူတိုတောင်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကားက triathlon ရဲ့အကွာအဝေးအမျိုးမျိုးအတွက်ဘယ်ကိုယ်ထည်ဘောင်ဟာသင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိစေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအထက်တန်းလွှာအဆင့်တွေ၊ ရာခိုင်နှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေရာခိုင်နှုန်းရဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒီအဆင့်မှာရတဲ့အခါမင်းသိသိသာသာကွာခြားမှုရှိတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
သင်၏အဆုတ်စွမ်းရည်၊ သင်၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်၊ နာကျင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကထိုလူများအား (မြည်သံ) ဖြစ်စေရန်ကူညီသည်။ အောင်ပွဲခံအပြေးပြိုင်ပွဲ ၀ င်ပြိုင်ပွဲများသည်အလွန်ပင်ခက်ခဲသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ကံကောင်းခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များရှိပါသည်။
Triathlon တွင်ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာများမှာယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်၊ ပိုမို၍ သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောလူများ၊ ပိုမိုပါးလွှာသော၊ ပါးလွှာသော၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသောလူများသည်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကွာအဝေးပြိုင်ပွဲများ၊ Sprint အကွာအဝေးပြိုင်ပွဲများနှင့်အိုလံပစ်အကွာအဝေးပြိုင်ပွဲများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ Mario Mola, Gwen Jorgensen, Alistair နှင့် Jonny Brownlee စသည့်လူများကိုစဉ်းစားပါ။ ဤလူများသည်အလွန်ပိန်လှီ။ အလွန်မိုက်သောအရာဖြစ်ပြီးအတိတ်တွင် Iron Man ၏အကွာအဝေးတွင်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်မှာယနေ့ခေတ် Iron Man အကွာအဝေးတွင်ဤကဲ့သို့သောအထူးပြုမဟုတ်သောကြောင့်
ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် Iron Man ကိုအနိုင်ရမယ့်အမြန်ဆုံး Iron Man အားကစားသမားနဲ့တူတယ်။ လူတွေက ITU ကနေ Iron Man အထိဘွဲ့ယူနေကြတယ်။ ငါတို့မြင်နေတာကဒီထက်ပိုသောပညာရှင်ဆန်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လား။ Iron Man ကိုသွားတဲ့အထက်တန်းလွှာအားကစားသမားတွေပိုများလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနဲ့မတူတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားတွေအကြားကွာခြားမှုအချို့ကိုတွေ့နေရတယ်။
ငါမြင်ခဲ့တာကတော့သံက Man အကွာအဝေးမှာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကပိုလေးတယ်၊ ပိုရှည်တယ်၊ ငါထင်တာကတော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိုးသွင်းထားတာကြောင့်ရိုက်နှက်မှုကိုခံနိုင်လောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအားကောင်းနေဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့ Sebastian Kienle၊ Ben Hoffman၊ Jan Frodeno, Mirinda Carfrae, Daniela Ryf စတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဒီလူတွေကခင်ဗျားကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ခင်တကယ့်ကိုကြွက်သားတွေပါ။
မင်းငါ့ကိုအရမ်းချစ်တယ် သူတို့ကအစိုင်အခဲတွေ၊ ငါတကယ်မြင်တာနဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာကတော့ Alistair Brownlee က Iron Man ရဲ့အကွာအဝေးတစ်ဝက်ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမှတ်မိချင်တယ်လို့ပါ။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းက 'သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအပိုရိုက်တာကိုခံနိုင်မှာပါ့မလား။ “ ကောင်းပြီ၊ သူထွက်လာပြီး Iron Man အကွာအဝေးတစ်ဝက်မှာလူမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့ပူပြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချပစ်လိုက်တယ်။ အခုရာသီအတွက်တော့လူအချို့အတွက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအဆုံးသတ်သွားတဲ့တင်ပါးဆုံရိုးအစားထိုးနေရာယူထားတယ်။
သူဟာသူဟာပါးနပ်တဲ့အတွက်သမိုင်းရှိခဲ့တယ်၊ အခုဆိုလိုတာကခင်ဗျားဟာပိုသာတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင် Sprint အကွာအဝေး၊ အိုလံပစ်အကွာအဝေးကိုလုပ်သင့်တယ်၊ 'မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာတစ်ဝက်သံနဲ့အပြည့်အဝ' သံ 'လုပ်လို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အဲဒါပဲ ' သို့မဟုတ်သင်အမှန်တကယ်ကြွက်သားများဖြစ်နေပါက 'ငါကောင်းပြီငါဟာ Man Man အားကစားသမားတစ်ယောက်အပြည့်ပါပဲ။ ' မဟုတ်ပါ၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။
ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်အထက်တန်းလွှာ၏အထက်တန်းလွှာ၏အထက်တန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ငါတို့လူသားတွေအတွက်တော့မင်းလိုချင်တာကိုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုရောက်ရှိနေသည့်အဆင့်တွင်၊ သင်သည်အခြားတစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်စည်းကမ်းတစ်ခုတွင်သင်မပြိုင်နိုင်သည့်အထိထူးခြားမှုမရှိနိုင်ပါ။
ငါခံနိုင်ရည်အားကစားကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ရန်အခြေခံအားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ ငါ sprinter တစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းစက်ဘီးစီးဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ စက္ကန့် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ လောက်မြန်မြန်သွားပါ။
ဥပမာဒီသစ်ပင်စည်များကိုကြည့်ပါ။ ဤအရာများသည်ကြီးမားလှ၏၊ သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့သင့်သည်။ ခင်ဗျားက 'အိုး၊ ခင်ဗျားတို့မှာ chamois တွေရှိတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် - 'ငါ့မှာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ' ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါခံနိုင်ရည်ရှိဖို့မဟုတ်ဘဲခွန်အားအတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီဟာကငါခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အားကစားကိုလုပ်တယ်၊ ငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်၊ ​​တကယ်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်၊ နည်းပြပတ်လိုကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရတာဟာကျွန်တော့်ရဲ့ခန့်မှန်းရခက်မှုထက်ကျော်လွန်ပြီးအားအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းအားနဲ့လေ့ကျင့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ငါ Pat နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဘူးသောအခါငါအဘို့အလွယ်ကူသောအခါ။ ပြီးတော့သူကအခြေခံအားဖြင့်ငါ့ကိုပြန်ပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟာရှည်လျားပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ tempo တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကအမြန်တွန့်လိမ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲသလိုပါပဲ၊ ပါဝါကြွက်သားအမျှင်တွေကဖြည်းဖြည်းလွင့်လွင့်သွားတာနဲ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိအောင်အားကစားသမားအဖြစ်ပြောင်းလဲတာနဲ့တူသလိုပဲအလုပ်ဖြစ်ပုံရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကြာရှည်ခံသည့်မက်ထရစ်များသည်တဖြည်းဖြည်းတွားသွားပြီးကျွန်ုပ်၏ချက်ချင်းမက်ထရစ်များမှာအတူတူပင်။ အပြေးရုံလိုပဲ Trainiacs၊ လုပ်သာလုပ်ပါ။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ နေ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
ငါဒီမနက်ဆိုင်ကယ်စီးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးခဲ့တယ် 2017 ၏ White ကတုပ်ကွေးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်သွားကြကုန်အံ့ အိုးချိုမြိန်သနားတျောမူကင်လုပ်ခိုင်း, Trainiacs ။
Has It သည် Trainiacs မှ '၂၀၁၇ ၏ Great White Flu' ကိုထောက်ပြခဲ့သည်။ ကောင်းသော, ကောင်းစွာ, အပြင်ဘက်နှင့်တက်ကြွဖြစ်။ ဒီခရီးစဉ်ကအရမ်းတိုနေရင်တောင်
တစ်နာရီ ၂၂ မှာကျွန်တော်တို့ဟာကီလိုမီတာ ၄၀ ပြန်လာခဲ့တယ်။ နေ့ရက်တိုလာတာကြောင့် ၁၀ ကီလိုမီတာတိုတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့နာရီဝက်လောက်နောက်ကျတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်နောက်ကျော၌ Knog အလင်းအိမ်, ရှေ့ရှေ့မီးရှေ့မှောက်၌မီးကိုထုတ်ပစ်ရန်ရှိသည်။ သင့်တွင်လုံးဝမှောင်မိုက်သောအခါရှင်းလင်းသည့်မှန်ဘီလူးများရှိပြီးအနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည့်အခါမှောင်လာသည့်အခါ၎င်းကိုဘာခေါ်သနည်း။ အဲဒါဘာကိုခေါ်တာလဲ ငါဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမသိဘူး ဤရွေ့ကားသေးငယ်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုအထုပ်ထဲမှာ Rudy Project မှငါ့ကိုပေးသောငါ့အကြိုက်ဆုံးအရာဖြစ်ကြ၏။
အဲဒါကြီးပရိတ်သတ်ကြီး။ အပြင်ဘက်မှာမှောင်မိုက်နေတဲ့အခါ Game changer ။ ဒါပေမယ့်အင်း၊ ဒါကအရမ်းကောင်းတယ်။
အတော်လေးပြောရရင်ကျွန်တော့်မှာ Heavy Leg Syndrome ရှိခဲ့တယ်၊ သူတို့ကတစ်နာရီ ၄၀,၀၀၀ ကျော်အထိကောက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အားလုံးညာဘက်ကျန်းမာဖျော်ရည်။ သွားပြန်ပြီ!
တစ်နာရီစက်ဘီးစီးခြင်းသည် ၁ နာရီကောင်းပါသလား
စက်ဘီးစီးခြင်းတစ်ခုနာရီရန်နေ့ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ် ဦး က 180 ပေါင်တစ် ဦး ချင်းစီစက်ဘီးစီးခြင်းတစ် ဦးနာရီတစ် ဦး အလယ်အလတ်ပြင်းထန်မှုမှာအကြောင်းကို 650 ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း။ တောင်မှစက်ဘီးစီးခြင်းမိနစ် ၃၀ ကနေ့တစ်နှစ်လျှင်တစ်နှစ်ကယ်လိုရီ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးပေါင် ၃၀ နီးပါးကျဆင်းနိုင်သည်။07.25.2020
စက်ဘီးစီးခြင်းအလုပ်များမင်းရဲ့ခြေထောက်များဂလူး၊အထူးသဖြင့်သင်တောင်တက်နေစဉ်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကြာရှည်မခံပါသို့မဟုတ်ကြွက်သားကြီးများကိုတည်ဆောက်ရန်လုံလောက်သောခုခံနိုင်မှုမပေးပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် cardio လှုပ်ရှားမှုစက်ဘီးစီးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ပိုကောင်းအဆီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမီးရှို့မှာမင်းရဲ့ဒါဟာမှာဖြစ်လိမ့်မည်ထက် glute ကြွက်သားသင်၏တင်းပါးပိုကြီးတဲ့။
ဟုတ်ကဲ့!စက်ဘီးစီးနိုင်သည်ကူညီကြပါမင်းရရန်အစာအိမ်အပြား။ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်နိုင်သည်အားဖြင့်ဖောင်းပွမှာအဆီကိုမီးရှို့ရမည်စက်ဘီးစီးခြင်း။စက်ဘီးစီးခြင်းတစ်ပေါင် ၁၃၀ ရှိသောလူများသည်အလွန်ကောင်းသောကယ်လိုရီကိုသုံးသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်လုပ်နိုင်တစ်နာရီအားကောင်းသောစက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ကယ်လိုရီ ၆၀၀ နီးပါးကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊စက်ဘီးစီးနိုင်သည်ကူညီကြပါဗိုက်အဆီဆုံးရှုံးဒါပေမယ့်အလိုတော်အချိန်ယူပါ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုကပုံမှန်ပြသခဲ့သည်စက်ဘီးစီးခြင်းအားလုံးအဆီဆုံးရှုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည် ရန်လျှော့ချခြုံငုံသောဝမ်းဗိုက် girth၊ အလယ်အလတ်ပြင်းထန်သောအေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့စက်ဘီးစီးခြင်း(မိုးလုံလေလုံဖြစ်စေ၊ အပြင်၌ဖြစ်စေ) သည်ထိရောက်မှုရှိသည်ဗိုက်အဆီ။
ဤပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ဖို့ ၁၂ လခန့်ကြာခဲ့သည်ကအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုစက်ဘီးစီးခြင်း၏အပေါ်ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဍာန်။ ဒါပေမယ့်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရန်အလေးချိန်အတွက်ကြီးမားသောကျဆင်းခြင်းနှင့်တစ် ဦး တိုးကခြေထောက်နှင့်အထက်ကိုယ်ခန္ဓာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
စက်ဘီးစီးခြင်းကအဆီကိုလောင်စေတယ်? ဟုတ်တယ်။ သင့်ရဲ့ပေမယ့်အစာအိမ်ကြွက်သားများသည်သင်၏ quad များသို့မဟုတ် glute များကဲ့သို့ခဲယဉ်းသည်မင်းစီးနေပေမယ့်စက်ဘီးစီးသည်အေရိုးဗစ်သဘောသဘာဝကိုဆိုလိုသည်မင်းကမီးလောင်ရာအဆီ။
ပရိုဂရမ်သည်ခွန်အားနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်ပြီးအခမဲ့အလေးချိန်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်းများပါ ၀ င်သင့်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းစက်များအသုံးပြုခြင်းထက်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုအားကစားပိုများနိုင်သည်။ multijoint လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်အမျိုးအစားလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
စက်ဘီးစီးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအစွမ်းခတ်ခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသင်စဉ်းစားသောအခါသင်လိုအပ်တာကိုအရင်လေ့လာပါ။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်တစ်ကြိမ်လျှင်ခြေထောက်တစ်ချောင်းစီဖြစ်တတ်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်လည်းသင်၏စက်ဘီးကိုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်အလုံးစုံခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့တွင်ခိုင်မာသောအဓိကလိုအပ်သည်။
အဆင့် (၁) မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အချိန်ကိုစက်ဘီးပေါ်တွင်တင်ပါ။ ပတ်ပတ်လည်လမ်းမရှိပါတယ်။ စက်ဘီးစီးသူများသည်တင်းကြပ်သောခံနိုင်ရည် - လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သူတို့၏အေရိုးဗစ်နှင့် an နာဘီအားစနစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်လိုသည်။